पेरु कम्युनिष्ट क्रान्ति साइनिङपाथका अध्यक्ष गोन्जालोको जेलभित्रै निधन क्रान्तिकारीहरुले गरे, गोञ्जालोको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको दावी
भदौ २७, काठमाडौं । पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङपाथ) का अध्यक्ष डा.अभिमायल गुज्मन ‘क.गोञ्जालो’को निधन भएको छ । सन् १९९२ मा तत्कालिन पेरुको फुजीमोरी सरकारले पक्राउ गरेर जेलमा राखेका गोञ्जालोको ८६ वर्षको उमेरमा जेलमै रहेको अवस्थामा शनिबार राती निधन भएको हो ।
विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन धाराशायी भएका बेला पेरुमा गोञ्जालोको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको आन्दोलनले संसारभरका क्रान्तिकारीहरुलाई उर्जा दिइरहेको थियो । गोञ्जालोको विचार र दर्शनबाट नेपालका माओवादीहरुले पनि प्रेरणा लिइरहेको र गोञ्जालो विचारधाराको बहस चलाइरहेका थिए । दार्शनिक नेता गोन्जालो पेरुको मात्रै नभएर विश्वभरका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीका प्रेरणाका स्रोत मानिनुहुन्थ्यो ।
को हुन् गोन्जालो ?
गोन्जालोको वास्तविक नाम अभिमायल गुजम्यान हो । उनको जन्म सन् १९३४ मा पेरुको दक्षिण तटमा अवस्थित मोलेन्डो शहर नजिक भएकै थियो ।
सन् १९९० को दशकमा पेरु कम्युनिष्ट पार्टी (साइनिङ पाथ) का अध्यक्ष गोन्जालोको नेतृत्वमा सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको थियो । गाउँदेखि शहर घेर्ने रणनीति अन्तर्गत सो क्रान्तिले पेरुका अधिकांश गाउँ र केही मुख्य शहरहरुसमेत कब्जा गरिसकेको थियो । साइनिङ पाथ राजधानी लिमासहित केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यको नजिक पुगिसकेको थियो ।
यसैक्रममा सन् १९९२ सेप्टेम्बर १२ तारिखका दिन राजधानी लिमा शहरको एक घरबाट गोन्जालोलाई तत्कालिन फुजीमोरी सरकराले पक्राउ ग¥यो । गोञ्जालो पक्राउ परेलगत्तै उहाँलाई सैनिक जेलमा थुनेर आजीवन काराबासको सजायँ सुनाइएको थियो । गोञ्जालोको पक्राउसँगै साइनिङपाथका, दोस्रो, तेस्रो र चौथो तहका नेताहरुसमेत पक्राउ परे । त्यसपछि विजय नजिक पुगेको पेरु कम्युनिष्ट पार्टी साइनिङपाथको ओरालो यात्रा सुरु भयो । गोञ्जालो जेलमै रहेका बेला त्यहाँको कम्युनिष्ट आन्दोलन उठनै नसक्नेगरी तहसनहस भयो ।
सन् १९८१ बाट शुरु भएको पेरुको कम्युनिष्ट क्रान्तिले गोञ्जालो लगायतका चौथो तहका नेताहरुको समेत गिरफ्तारीपछि गम्भीर धक्का खायो । सोही कारण सन् १९९५ सम्म केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेर नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसक्ने योजना सफल हुन सकेन । गोञ्जालो लगायतका नेताहरुको गिरफ्तारीपछि पनि पेरुको जनयुद्ध सन १९९९ सम्म सञ्चालन भएको थियो । १८ वर्षसम्म पेरुमा चलेको जनयुद्धका क्रममा कम्तीमा ७० हजार पेरुभियाली क्रान्तिकारीहरुको ज्यान गएको थियो ।
भ्mण्डै ३० वर्षदेखि जेलमा रहेका गोञ्जालोको रिहाईको माग गर्दै नेपाललगायत विश्वभरका क्रान्तिकारीहरुले आवाज उठाईरहेका थिए । नेपालमा केही समयदेखि गोञ्जालोको रिहाई हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन समेत हुँदै आएको थियो । यद्यपि संसारभरका क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो आस्थाको स्रोत गोञ्जालोको जेलभित्रै निधन हुन पुगेपनि गोञ्जालोको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको दावी गर्दै आएका छन् । गोञ्जालोको निधनले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई अपुरणीय क्षति पुगेको छ ।
आईतवार २७ भाद्र, २०७८
कोरोनाविरुद्ध तीव्र गतिमा काम भइरहेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको दावी
​​​​​​​भारतीय गुप्तचरसँग भेट नभएको प्रचण्ड सचिवालयको दावी
जनताको अदालतभन्दा ठूलो अर्को अदालत नभएको उपेन्द्र यादवको दावी
प्रतिनिधिसभा नमासिएको बरु अनुशासित प्रतिनिधिसभाको खोजीका लागि संसद् विघटन गरिएको पोखरेलको दावी